Goobaha Makusoo Soccer | Express Sports & Makusoo Casino | Best Heshiisyada Makusoo Online
Goobaha Makusoo Soccer – Ku biir Hadda
Goobaha Makusoo Soccer – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
Ever ahayd in a 'Super Bowl Sunday' ama goob joog dhidib qaniinay NFL dhameysatay?
Haa, ee aan ka hadleynay ka sugayeen ka soccer waayo-aragnimo, buuxeen gaiting dabada xad-dhaaf ah iyo madaxa dareen on shilalka. Waa halkan guys – koobka adduunka FIFA ayaa soo gaaray!
Qandho koobka aduunka ka soo sara kiciddii, punters berrinkii Khamaarka waxaa socday oo dhan ka soo baxday inay lacag ku qalmay culus oo dhidbahaagana. Waa aan loo baahnayn in la sheego in ay jirto hamiday ah Isboortiga, waxaa ku xidhan tahay in ay murugooto ama laba in la furo kartaa dariiqa ah Khamaarka dunida u ciyaaro on.
Well, sida Hadalku tagaa; aad ku guuleysan qaar ka mid ah, aad lumiso qaar ka mid ah - waa dhan qayb ka mid ah ciyaarta!
Waxaad soo duuduubo waa!
Waxaan beensheegayaal ahayna ma aad ogtahay halka ay jaridda gal goobta dhab ah. Aynu this tallaabo dheeraad ah qaadan.
Sidee ku saabsan waxaan u falanqeeyaan suuqyada kala duwan goobahan shaqeeyaan ka? Aan xaq talaabo u galay ka dibna.
Goobaha Makusoo Soccer Bet Blog Will Sii dib markii Table Bonus ee hoos ku
Waxaa jira dhowr suuqyada in goobaha sharadka soccer shaqeyn ka. Halkan ka hoos jabiyay dhowr ah si fiican loo fahmo:
Total Goolal: Tani waa istiraatiijiyad sharadka heer multi in weeyaan ciyaaryahan si sharad tirada guud ee gool oo la dhaliyay doona ciyaar. safafka Heerka ka duwan yihiin laga yaabo in 0 -1, 2-3, 4-6 ama xataa shir sanadeedkii a 8 oo gool ka sarreeya halkii ciyaar. Heer kasta ama doorasho soo xulay ciyaaryahanka la dhigayaa at a cajiib ah u gaar ah.
Qalmay ama Evens: Tani waa istiraatiijiyad sharadka laba heer halkaas oo ciyaaryahan ayaa loo baahan yahay si ay u soo duuduubo haddii tirada guud ee gool u dhaliyay labada kooxood wuxuu noqon doonaa kisi ah ama xitaa tirada.
wakhti badhkiis iyo xeelado sharadka waqtiga buuxa: Sida muddada soo jeedisay, istaraatijiyad sharadka this ayaa ciyaaryahanka sharad ku saabsan natiijada dhamaadka ee la soo dhaafay bar iyo kulanka buuxa. isku darka A of Home, Isku Aadka oo fog ayaa ay u qoondeeyaan, iyadoo u qalmay u gaar ah.
score saxda ah: Hadda tani waa mid ka adag. Sida aad la yaabaa in sarcaadka horeba, waxaa yeedhi ciyaaryahanka si sharad ku saabsan dhabta ah score ee ciyaarta. Sidii la filayay, qorshahan ayaa u qalmay sare Mire Waqaf oo ka soo hor jeedda iyo caddayn karaan in ay jidka laga fakaray in badan oo mushaar-baxay.
Heedhe, iyadoo dhammaan macluumaadka in habka soo socda, Waa in aad dareento sida punter a Marexaan hore u eh?
Goobaha Makusoo Soccer Blog for Sports.expresscasino.co.uk. Ka dhig Waxa aad ku guuleysato!